मेरो लागि, यो पुस्तक म मेरो प्रबंध मा काम थियो, 2005 मा सुरु भयो। म एक अनलाइन प्रयोग, म सबै अध्याय4मा बारेमा बताउन छौँ जो चलिरहेको थियो, तर अब म तिमीलाई छ कि कुनै पनि शैक्षिक कागज छैन केहि भन्न लागिरहेको छु। र, यो मौलिक परिवर्तन भन्ने कुरा म अनुसन्धान सोच्न कसरी गर्ने। एक बिहान, जब म वेब-सर्भर जाँच, म ब्राजील देखि बारेमा एकै रातमा 100 मानिसहरू मेरा प्रयोग मा भाग थियो फेला पारेका। यो अनुभव मलाई एक गहन प्रभाव थियो। त्यतिबेला म जो परम्परागत प्रयोगशाला प्रयोगहरु चलिरहेको थियो मित्र थियो, र म तिनीहरू, रंगरुट गर्न निरीक्षण, र आफ्नो प्रयोगहरू सहभागी मान्छे भुक्तानी काम थियो कसरी कठिन थियो; तिनीहरूले एक दिन मा 10 मान्छे चलाउन सक्छ भने, राम्रो प्रगति थियो। तर, मेरो अनलाइन प्रयोग संग, 100 मान्छे म सुतिरहेको बेला भाग। आफ्नो अनुसन्धान गर्दा तपाईं सुतिरहेको बेला साँचो हुन पनि राम्रो आवाज सक्छ, तर यो छैन। अब हामीले सङ्कलन र नयाँ तरिकामा सामाजिक डाटा विश्लेषण गर्न सक्ने डिजिटल उमेर-मतलब अनुरूप उमेर देखि प्रविधि-विशेष संक्रमण परिवर्तन। यो पुस्तक यी नयाँ तरिकामा सामाजिक अनुसन्धान बारेमा छ।
यो पुस्तक दुई फरक समुदाय लागि हो। त्यो थप डाटा विज्ञान गर्न चाहनुहुन्छ सामाजिक वैज्ञानिकहरूले लागि हो, र यो कि थप सामाजिक विज्ञान गर्न चाहनुहुन्छ डाटा वैज्ञानिकहरूले लागि हो। म यी समुदाय दुवै समय खर्च, र यो किताब त को quirks र शब्दजाल तिरस्कार तरिकामा सँगै आफ्नो विचार ल्याउन मेरो प्रयास छ। यस पुस्तकको लागि छ कि समुदाय दिइएको, यो पुस्तक केवल विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू लागि हो भन्दै बिना जानु पर्छ। म (अमेरिका जनगणना ब्यूरो मा) र प्रविधी उद्योग (माइक्रोसफ्ट रिसर्च मा) मा सरकार मा केही काम गर्नुभएको छ, र म त्यहाँ विश्वविद्यालय को बाहिर भइरहेको रोमाञ्चक अनुसन्धान धेरै छ भनेर थाह छ। त्यसैले, तपाईंले सामाजिक अनुसन्धान रूपमा गरिरहेका छन् के विचार छ भने, त्यसपछि यो पुस्तक तपाईं को लागि, तपाईं कहाँ काम वा तपाईं हाल प्रयोग प्रविधी कस्तो कुनै कुरा छ।
हामी डिजिटल युगमा सामाजिक अनुसन्धान को प्रारम्भिक दिनमा अझै पनि छन्, र म यति मौलिक र यति साधारण यो मेरो भूमिकामा, यहाँ तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न को लागि सबै भन्दा अर्थमा बनाउँछ भन्ने हो कि केही गलत अर्थ देखेका छौँ। डाटा वैज्ञानिकहरूले देखि, म दुई साधारण गलत अर्थ देखेका छौँ। पहिलो थप डाटा स्वतः समस्या solves कि सोच छ। तर, सामाजिक अनुसन्धान को लागि मेरो अनुभव भएको छैन कि छ। वास्तवमा, डाटा को सामाजिक अनुसन्धान नयाँ प्रकारको, एउटै डाटा बढी गर्न विरोध रूपमा, सबै भन्दा उपयोगी देखिन्छ। म डाटा वैज्ञानिकहरूले देखि देखेका छौँ कि दोस्रो गलतफहमीले सामाजिक विज्ञान साधारण अर्थमा वरिपरि र्याप फैंसी-भाषणको बस एक गुच्छा छ कि सोच छ। निस्सन्देह, सामाजिक रूपमा वैज्ञानिक-अधिक विशेष एक रूपमा समाजशास्त्री-म सहमत छैन; म सामाजिक विज्ञान प्रदान गर्न धेरै छ भन्ने सोच्छन्। स्मार्ट मान्छे एक लामो समय को लागि मानव व्यवहार बुझ्न गाह्रो काम गरिएको छ, र यो प्रयास देखि संचित छ कि बुद्धि बेवास्ता मूर्ख देखिन्छ। मेरो आशा यो पुस्तक तपाईं बुद्धिको केही बुझ्न सजिलो छ तरिकामा प्रदान गर्नेछ भन्ने छ।
सामाजिक वैज्ञानिकहरूले देखि, म पनि दुई साधारण गलत अर्थ देखेका छौँ। पहिलो, म केही मानिसहरू लेख्न-बन्द केही खराब कागजात आधारित डिजिटल उमेर को उपकरण प्रयोग गरेर सामाजिक अनुसन्धान को सम्पूर्ण विचार देखेका छौँ। तपाईंले यो किताब पढ्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईँले सम्भवत पहिले नै banal वा गलत (वा दुवै) हो कि तरिकामा सामाजिक मिडिया डाटा प्रयोग कागजात को एक गुच्छा पढें। म पनि छ। तर, यो सबै डिजिटल उमेर सामाजिक अनुसन्धान खराब छ कि यी उदाहरणबाट निष्कर्षमा पुग्न गम्भीर गल्ती हुनेछ। वास्तवमा, तपाईं शायद पनि banal वा गलत हुन् भनी तरिकामा सर्वेक्षण प्रयोग कागजात को एक गुच्छा पढ्न गर्नुभएको छ, तर तपाईं लेख्न-बन्द छैन सर्वेक्षण प्रयोग गरेर सबै अनुसन्धान। त्यो हो त्यहाँ सर्वेक्षण संग गरेको ठूलो अनुसन्धान छ भन्ने थाहा किनभने, र यस पुस्तकमा, म डिजिटल उमेर को उपकरण संग गरेको ठूलो अनुसन्धान पनि छ भन्ने देखाउन लागिरहेको छु।
म सामाजिक वैज्ञानिकहरूले देखि देखेका छौँ कि दोस्रो साधारण गलतफहमीले भविष्यमा संग वर्तमान भ्रममा छ। डिजिटल उमेर-को म यस मा वर्णन गर्न लागिरहेको छु भनेर अनुसन्धान मा सामाजिक अनुसन्धान आकलन गर्दा पुस्तक-यो दुई भेदभाव प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ:
कसरी राम्रो अब अनुसन्धान कार्य को यो शैली गर्छ?
कसरी राम्रो डाटा परिदृश्य परिवर्तन र अनुसन्धानकर्ताहरूले रूपमा भविष्यमा अनुसन्धान कार्य को यो शैली यी समस्या बढी ध्यान समर्पित हुनेछ?
अनुसन्धानकर्ताहरूले पहिलो प्रश्नको जवाफ प्रशिक्षण तापनि, यस पुस्तकको लागि, म दोस्रो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ लाग्छ। त्यो डिजिटल युगमा सामाजिक अनुसन्धान अझै विशाल उत्पादन छैन तापनि, छ, प्रतिमान-परिवर्तन बौद्धिक योगदान, डिजिटल उमेर अनुसन्धान को सुधार को दर अविश्वसनीय तीव्र छ। यो मलाई डिजिटल उमेर अनुसन्धान त रोमाञ्चक बनाउँछ कि परिवर्तन को यो दर, हालको स्तर भन्दा बढी छ।
पछिल्लो अनुच्छेद भविष्यमा केही नखुलेको समयमा तपाईं सम्भावित धन प्रदान गर्न देखिन्थ्यो तापनि, यस पुस्तकमा मेरो लक्ष्य अनुसन्धान को कुनै पनि विशेष प्रकार मा तपाईंले बेच्न छैन। म ट्विटर, फेसबुक, गुगल, माइक्रोसफ्ट, एप्पल वा अन्य कुनै पनि प्रविधी कम्पनी (पूर्ण खुलासा खातिर, म मा काम वा Microsoft, गुगल, र फेसबुक बाट अनुसन्धान कोष प्राप्त गरेका हुनत,) मा आफ्नै साझा व्यक्तिगत छैन। के तपाईं पहिले नै गरिरहेका छन् भन्ने अनुसन्धान खुसी छन् भने: ठूलो, तपाईं के गरिरहनु गर्नेगर। तर, तपाईं डिजिटल उमेर नयाँ र फरक कुरा सम्भव छन् भन्ने हो कि एक अर्थमा छ भने, त्यसपछि म तपाईं ती सम्भावनाहरू देखाउन चाहन्छु। तसर्थ, पुस्तक भर मेरो लक्ष्य तपाईं टाढा मैले देखेको छु भनेर अरूलाई फस्न केही पासो देखि मार्गदर्शक गर्दा एक विश्वसनीय बयान, रहन सम्भव छ भनेर सबै रोमाञ्चक नयाँ सामान बारेमा बताउन छ। म यो आफ्नो अनुसन्धान सुधार गर्न मद्दत र तपाईं राम्रो अरूको अनुसन्धान मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्नेछ भन्ने आशा।
तपाईं पहिले नै सूचना जारी हुन सक्छ, यो पुस्तकले को टोन केही अन्य शैक्षिक किताबहरु देखि एक बिट फरक छ। त्यो जानिजानि छ। यो पुस्तक म समाजशास्त्र विभाग मा प्रिन्स्टन मा सिकाएको एक स्नातक संगोष्ठी देखि देखा, र म ऊर्जा र उत्साह कि संगोष्ठी देखि केही कब्जा गर्न यो पुस्तक चाहन्छु। , सहयोगी आशावादी र भविष्यमा-उन्मुख: खासगरी यो पुस्तक तीन विशेषताहरु चाहनुहुन्छ।
सहयोगी: मेरो लक्ष्य लागि उपयोगी छ भन्ने पुस्तक लेख्न छ। तसर्थ, म एक खुला र अनौपचारिक शैलीमा लेख्न जाँदै छु। त्यो हो म व्यक्त गर्न चाहन्छु कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सामाजिक अनुसन्धान सोचिरहेका को एक निश्चित तरिका हो किनभने। र, शिक्षा मेरो अनुभव सोचाइ यसरी व्यक्त गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका informally र उदाहरण धेरै छ कि सुझाव।
आशावादी: दुई समुदाय यो पुस्तक संलग्न-सामाजिक वैज्ञानिकहरूले र डाटा वैज्ञानिकहरूले-छ धेरै फरक शैलीहरू। डाटा वैज्ञानिकहरूले साधारण उत्साहित छन्; तिनीहरूले आधा पूर्ण रूपमा ग्लास हेर्न गर्छन। सामाजिक वैज्ञानिक, अर्कोतर्फ, साधारण थप महत्वपूर्ण छन्; तिनीहरूले आधा खाली रूपमा ग्लास हेर्न गर्छन। यस पुस्तकमा, म मेरो प्रशिक्षण सामाजिक वैज्ञानिक रूपमा छ तापनि, डाटा वैज्ञानिक को आशावादी स्वर अपनाउने लागिरहेको छु। त्यसैले, जब म उदाहरण प्रस्तुत, म यी उदाहरणहरू बारेमा प्रेम के तपाईं बताउन लागिरहेको छु। र, जब म बाहिर समस्या दर्शाउन के उदाहरणहरू-र म यो कुनै अनुसन्धान सिद्ध-I'm एक तरिका सकारात्मक र आशावादी छ यी समस्या दर्शाउन प्रयास गर्न गइरहेको छ किनभने गर्नेछ। म महत्वपूर्ण हुनुको खातिर महत्वपूर्ण हुन जाँदै छु। म अझ सुन्दर अनुसन्धान सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ भनेर म महत्वपूर्ण हुन लागिरहेको छु।
भविष्य-उन्मुख: म यो पुस्तक आज अवस्थित कि डिजिटल प्रणाली र भविष्यमा सिर्जना गरिने डिजिटल प्रणाली प्रयोग सामाजिक अनुसन्धान गर्न मदत गर्नेछ भन्ने आशा। म 2003 मा अनुसन्धान को यस प्रकारको गर्दै सुरु, र तब देखि म परिवर्तन को धेरै देखेको छु। म स्नातक स्कूल मान्छे हुँदा सामाजिक अनुसन्धान को लागि माइस्पेस प्रयोग बारे धेरै उत्साहित थिए कि सम्झना। र, म त भनिन्छ के मेरो पहिलो वर्ग सिकाउनुभयो गर्दा "वेब-आधारित सामाजिक अनुसन्धान," मान्छे जस्तै SecondLife रूपमा भर्चुअल दुनिया बारेमा धेरै उत्साहित थिए। म भविष्यमा आज बारेमा कुरा गर्दै छन् के को धेरै मुर्ख र पुरानो जस्तो हुनेछ पक्का छु। यो तीव्र परिवर्तन को अनुहार मा सान्दर्भिक रहन गर्न चाल abstraction छ। त्यसैले यो ट्वीटर एपीआई कसरी प्रयोग गर्न ठीक सिकाउने एउटा पुस्तक हुन गइरहेको छ; बरु, यो तपाईं डिजिटल निशान (अध्याय 2) सिक्न कसरी सिकाउने एउटा पुस्तक हुन जा रहेको छ। यो तपाईं चरण-चरण निर्देशनहरूको चलिरहेको अमेजन यांत्रिक टर्क मा प्रयोगहरू लागि दिन्छ कि एक पुस्तक हुन गइरहेको छ; बरु, यो तपाईं कसरी डिजाइन र डिजिटल उमेर पूर्वाधार (अध्याय 4) मा निर्भर प्रयोगहरू व्याख्या गर्न सिकाउन रहेको छ। abstraction को प्रयोग मार्फत, मलाई आशा छ यो एक समय विषय मा एक विहीन पुस्तक हुनेछ।
म यो एक सामाजिक अनुसन्धानकर्ता हुन कहिल्यै सबैभन्दा रोचक समय छ लाग्छ, र म सटीक छ तरिकामा कि उत्तेजना व्यक्त गर्न प्रयास गर्न लागिरहेको छु। छ, यो नयाँ डाटा को जादु गर्ने शक्ति बारे अस्पष्ट generalities परे सार्न समय छ। यो विशिष्ट प्राप्त गर्न समय छ।